Madaxweyne Farmaajo oo si kulul uga hadlay weerarkii ka dhacay deegaanka Af-urur – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo si kulul uga hadlay weerarkii ka dhacay deegaanka Af-urur
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa si kulul uga hadlay weerarkii shalay ay dagaalyahanadda Al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada daraawiishta Puntland ee ku yaalla deegaanka Af-urur oo u dhaw degmada Galgala ee gobolka Bari.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa tacsi loogu diray qoysaskii iyo eheladii dadkii shalay ku geeriyooday weerarka ay Al-shabaab kusoo qaadeen saldhig ciidan ee ku yaalla deegaanka Af-urur.
“Waxaan aad uga tiraanyeysanahay geerida ku timid shacabkeena iyo ciidanka geesiyaasha ah ee ku baxay weerarkii tuulada Af-urur ee degmada Galgala, waxay u dagaallameen si geesinimo leh si ay u difaacaan dalkooda iyo dadkooda iyaga oo cibaadeysanaya bisha barakeysan ee Ramadaan.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka uu soo saaray madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid tilmaam u ah in Al-shabaab ay yihiin dad qatar ku ah shacanka iyo horumarka dalka Soomaaliya, loona baahan yahay in si wadajir ah loola dagaalamo.
“Wuxuu weerarkan caddeyn u yahay khatarta ay leeyihiin kooxaha cadowga ah ee aan la dagaalameyno, kuwaas oo doonaya inay mar walba dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee nabadda jecel, waxaan xoogeenna isugu geyn doonnaa sidii loo cirib tiri lahaa kooxaha argagixisada ah ee Al-shabaab” Ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka madaxweynaha.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa ku ballan-qaaday in Al-shabaab aanay marnaba looga hari doonin weerarkaasii foosha xumaa oo ay ka geysteen deegaanka Af-urur, isagoona tilmaamay in dhawaan lasoo afjari doonno haraadiga Al-shabaab.
“Waxaan ballan qaadeynaa in Al-shabaab aan looga hari doonin falkaan foosha xun, waxaana haatan haraadigooda ku daba-jira ciidamada daraawiishta Puntland, waan ku kalsoonahay in ciidamadeennu ay soo afjari doonaan falalka burcadnimada ah ee ay kooxdaan caaddeysatay inay maalin walba ku layso dad Soomaaliyeed.” Ayaa war-saxaafadeedka lagu soo gaba-gabeeyay.
Ugu dambeyn, madaxweyne Farmaajo oo qadka teleefanka kula hadlay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa uga tacsiyeeyay askartii shalay lagu dilay deegaanka Af-urur ee gobolka Bari, isagoona sidoo kale u ballan-qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay Puntland ka taageeri doonto dagaalka xoogan ee lagula jiro Al-shabaab.
Children in countries facing famine threatened by lack of water, sanitation – UN agency
Improved Security Helps Aid Access in Southwest Somalia (VIDEO)